Hery Rajaonarimampianina : Seho ara-toekarena goavana hatao ao Iavoloha -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Seho ara-toekarena goavana hatao ao Iavoloha
24/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Feno efa-taona ny alakamisy 25 janoary izao (25 janoary 2014- 25 janoary 2018) ny fianianan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tetsy Mahamasina tamin’ny naha voafidy azy hitantana ny firenena.
Ho fankalazana izany indrindra, dia hanatanteraka seho lehibe ara-toekarena tao anatin’izay efa-taona nitantanany sy nitondrany ny firenena izay ny Filohan’ny Repoblika, ny alakamisy 25 janoary izao, eny Iavoloha.
Mandritra izany mantsy no hanehoany sy hizarany amin’ny vahoaka ny fomba fijeriny ny tontolon’ny toekarena sy ny fisandratan’ny firenena tao anatin’izay fotoana izay. Manaraka izany ny famelabelarany ireo tetikasa maro samihafa, izay misy ny ao anatin’ny fohy ezaka, ary misy ihany koa ny lavitr’ezaka. Eo ihany koa ny hampahafantarany ny vahoaka fa niakatra 4,1% ny harinkarena faoben’i Madagasikara sy ny maha modely antsika amin’ny fisandratana aty Afrika. Noho izay, dia handeha mivantana amin’ny televiziona malagasy (TVM) sy ireo haino aman-jery hafa izany seho goavana ara-toekarena izany.
Anisan’ny vina goavan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mantsy ny hananan’i Madagasikara fahaleovantena eo amin’ny tontolon’ny angovo. Izany indrindra no mahatonga ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny Fitondrana sy ny tsy miankina. Efa nisesy rahateo ny fanomezana herinaratra ho an’ireo mponina an-tanàn-dehibe sy any ambanivohitra.
Ho an’Antananarivo sy manodidina fotsiny ohatra , dia efa nahazo herinaratra mitotaly 182 MW, izay mitsinjara toa izao, 40 MW vokarin’ny orinasa Symbion Power, 66 MW vokarin’ny Aksaf Power ary 76 MW avy amin’ny Noor I sy Noor II. Tsy vitan’izay maro ihany koa ny toho-drano famokarana herinaratra vita, ary indrindra fa ny fanomezana herinaratra ny mponina amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina, izay avy amin’ny masoandro.
Izay indrindra no mahatonga ny Filohan’ny Repoblika manambara fa efa ao anatin’ny fiampitana tsikelikely mankany amin’ny angovo azo havaozina ny firenena. Tsy vitan’izay fa mbola ho avy ny tetikasa eo amin’ny tontolon’ny herinaratra ao Ivolobe, Faritra Atsinanana, izay mampifandray ny herinaratra ao Toamasina amin’Antananarivo. Izany tetikasa izany dia mbola manaporofo ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny orinasa tsy miankina, sns. Ny lafin’ny famokarana sy ny fambolena ary varotra sy ny fizahantany mbamin’ny fanorenana fotodrafitrasa maharitra ihany koa moa dia fampandrosoana efa napetraky ny Filoha tao anatin’izay efa-taona izay sy ny mbola tohizany amin’izao fotoana.
Art And Entertainment dans At solmen va esser necessi far uniform lingues
Free v bucks no human verification or survey dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
Immigration Law Firm: Title [...]Every when inside a whilst we pick blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date…
Travel & Leisure: It¡¦s really a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful information with…